Manchester United, Chelsea iyo Arsenal oo xidig muhiim ah ka doonaya kooxda Roma – Gool FM
Manchester United, Chelsea iyo Arsenal oo xidig muhiim ah ka doonaya kooxda Roma
(Premier League) 17 Nof 2018. Wargeyska Talyaaniga ah ee “Corriere dello Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in wakiilka ciyaaryahan kooxda Roma ee Lorenzo Pellegrini uu dhageysanayo dalabyada ka imaanaya saddexda kooxood ee horyaalka Premier League, kaasoo ku aadan xidiga reer Argentina.
Dhamaan kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Arsenal ayaa wada xiiseenaya inay la saxiixdaan 22 jirka kooxda AS Roma ee Lorenzo Pellegrini, kaasoo qaab ciyaareed wanaagsan sameenaya xili ciyaareedkan.
Lorenzo Pellegrini ayaa heshiiska uu ku joogo kooxda Roma waxaa lagu kansali karaa aduun dhan € 30 million, laakiin sida ay baahineyso warbaahinta dalka talyaaniga koox kasta ayaa dooneysa in ay si sahlan ula saxiixdaan laacibkan khadka dhexe.
Dhinaca kale sida ay daboolka ka qaadeen wararka ka imaanaya gudaha dalka Talyaaniga wakiilka Lorenzo Pellegrini ayaa maalmo kahor gaaray magaalada London, si uu u dhageysto dalabyada kooxaha reer London ee Chelsea iyo Arsenal, isagoo u muuqda mid iska indho tiray Manchester United.
Lorenzo Pellegrini ayaa ku biiray kooxda Roma xilli ciyaareedkan wuxuuna ilaa iyo haayan u ciyaaray 13 kulan, isagoo u dhaliyay 2 gool, xili sidoo kale uu caawiyay 5 gool kale, taasoo sababtay in kooxo fara badan ay xiiseeyaan saxiixiisa.
Markii hore waa Lovren, Iminkana van Dijk oo Weerar ku qaaday Sergio Ramos.....(Maxaa lagu heystaa Kabtanka Real Madrid??)
"Waxaan ku Noolaa Qol Mugdi ah, mana heysan Wax Wehel ah oo aan ka ahayn...!!"-Laacibkii hore ee Arsenal Alex Song oo galay NOLOL XAKAAR AH